Nepali Rajneeti | अस्पतालको बेडमा बेहुलाले लगाइदिए बिरामी भएकी बेहुलीलाई सिन्दुर: यस्तो माया कहाँ पाइएला ?
अस्पतालको बेडमा बेहुलाले लगाइदिए बिरामी भएकी बेहुलीलाई सिन्दुर: यस्तो माया कहाँ पाइएला ?
पुष १, २०७७ बुधबार ७५२ पटक हेरिएको
तपाइले हिन्दी फिल्म हेर्ने गर्नुभएको छ भने २००६ मा, सूरज बड़जात्याले बनाएको फिल्म विवाह को बारेमा थाहा छ होला ।
जसमा दुलही बनेकी अमृता राव आफ्नो बहिनी नाता पर्नेलाई बचाउन आगोमा जल्छिन् ।
तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बेहुला बनेका शाहिद कपूरले उनीसँग विवाह गरे। यो रिलको जीवनको तस्विर हो जुन पनि ठूलो हिट थियो । तर वास्तविक जिवनमा यस्तो घटना दुर्लभ हुन्छ ।
तर भारत यूपीको प्रयागराजमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । यो घटना संगम शहर प्रयागराजमा फेला परेको छ । जहाँ भर्खरकी दुलही आरती अस्पतालको खाटमा सुतिरहेकी छिन् र उनको हातमा मेहंदी लगाईरहेकी छिन र उसको छेउमा बसिरहेको युवक उनका पति अवधेश हुन् जो उनकी पत्नीको रेखदेखमा छन्।
वास्तवमा, प्रतापगढको कुंडा क्षेत्रमा बस्ने आरतीको लागि विवाहको तयारी पूरा भएको थियो र जन्ती आउँदै थियो, तर दिउँसो उनी आफ्नो तीन बर्षे भतिजालाई छतमा खेल्ने क्रममा बचाउन छतबाट खसिन्् । दुर्घटनामा उसको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो र दुवै खुट्टामा पनि समस्या छ ।
घरका साथीहरूले उनलाई प्रयागराजको निजी अस्पतालमा भर्ना गरे। जब दुलहा अवधेशलाई घटनाको बारेमा खबर गयो । घटनाको सत्यता र घटना पनि दुलहा अवधेशलाई दिइयो। आरतीको घरका मानिसहरूले अवधेशलाई आरतीको कान्छी बहिनीसँग बिहे गर्न भने तर अवधेशले निर्णय गरेका थिए कि आरती उसको जीवनसाथी बन्न सक्छ, जे भए पनि जीवनभर उनलाई सहयोग गर्ने छ।
अवधेशले आफ्नो धार्मिक पत्नी आरतीको पूरा ध्यान राख्छन्। दुबैको साहस र साहसलाई सलाम गरेर नजिकका आफन्तहरू र परिवारका सदस्य पनि खुसी भएका छन् । उही समयमा, आरतीको परिवारले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि उनलाई एम्बुलेन्सबाट कुंडा फिर्ता लगे र विवाह गरे ।
जहाँ अवधेशले ओछ्यानमा रहेकी आरतीलाई सिन्दुर लगाइदिए । त्यसपछि आरतीलाई प्रयागराजको यस अस्पतालमा भर्ना गरियो।